Ubushushu obuphezulu be-PH kunye ne-ORP abaenzi beSensor - China Ubushushu obuphezulu be-PH kunye ne-ORP yeSensor Factory kunye nababoneleli
Ubushushu obuphezulu PH & ORP woluvo
I-PH5806-VP Ubushushu obuphezulu be-PH woluvo
Yamkela ubushushu bokuxhathisa i-dielectric kunye ne-dielectric eyomeleleyo yesakhiwo sokudibana kolwelo; kwi iimeko xa i-electrode ingaxhunyiwe kuxinzelelo lwasemva, uxinzelelo lokumelana nayo I-0 ~ 6Bar. Ingasetyenziswa ngqo l30-nzala.
I-PH5806-S8 ubushushu obuphezulu be-PH woluvo
Yamkela ubushushu bokuxhathisa i-dielectric kunye ne-dielectric eyomeleleyo yesakhiwo sokudibana kolwelo; kwi iimeko xa i-electrode ingaxhunyiwe kuxinzelelo lwasemva, uxinzelelo lokumelana nayo 0.4MPa. Ingasetyenziswa ngqo l30-nzala.
I-PH5806-K8S ubushushu obuphezulu be-PH woluvo
Akukho sidingo sokongezwa kweelektri kwaye kukho isixa esincinci sokugcinwa.
Yamkela i-K8S kunye ne-PGl3.5 ngentambo, enokuthi ithathelwe indawo yiyo nayiphi na i-electrode yaphesheya.
PH5806 Ubushushu High PH woluvo
Kubude be-electrode, kukho i-120, 150, 210, 260 kunye ne-320 mm ekhoyo; ngokweemfuno ezahlukeneyo, banokukhetha.
PH5803-K8S Industrial ORP woluvo